Ciyaar Adag Oo Dhex-martay Xulalka Kubada Ee Somaliya Iyo Ugand Oo Lasoo Gaba-gabeeyay.(Sawiro) AwdalMedia Awdalmedia Ciyaar Adag Oo Dhex-martay Xulalka Kubada Ee Somaliya Iyo Ugand Oo Lasoo Gaba-gabeeyay.(Sawiro)
Ciyaar Adag Oo Dhex-martay Xulalka Kubada Ee Somaliya Iyo Ugand Oo Lasoo Gaba-gabeeyay.(Sawiro)
Xulka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa guul-darro labaad oo xiriir ah kala kulmay dhiggooda dalka Uganda, kullan ka tirsanaa lugta labaad isrebrebka koobka Chan cup 2020 ee lagu qaban doono dalka Cameroon.
Ciyaartan oo goor dhow ku soo dhammaatay magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda ayaa ku soo billaabatay si xooggan,waxaana inta badan la beddelay ciyaaryahannadii kulankii hore ee ka dhacay dalka Jabuuti,waxaa kulankaan Soomaaliya hoggaaminaayay kabtan Daa’uud Tubaal,waxaa sidoo kale la beddelay goolhaye Mustaf,waxaa goosha ku soo billoawday goolhayaha kooxda dekedda Xasan.
Kulanka wuxuu ku soo dhammaaday 4-1 uu ku badiyay xulka Uganda, ciyaaryahan ka tirsan xulka kubadda cagta Uganda oo lagu magacaabo Kaddu ayaa saddex gool ka dhaliyay xulka Soomaaliya, halka goolka afaraad uu dhaliyay ninka lagu magacaabo Kyambadde.
Soomaaliya,waxaa goolka kaliya ee kulankaan ka dhalisay u dhaliyay laacibka lagu magacaabo Daa’uud Tubaal daqiiqadii 90-aad,iyada ugu dambeentii ciyaarta ay ku soo dhammaatay 4-1 uu ku baddiyay xulka Uganda.
Kulankii hore ee ka dhacay dalka Jabuuti,wuxuu ku soo dhammaaday 3-1 uu ku badiyay xulka Uganda. Isku geenta goolasha looga badiyay Soomaaliya waa 7-2 (7-2), waxaana natiijada ay dhalisay in xulka Soomaaliya uu gabi ahaanba ka haro tartanka Chan Cup.
Xulka kubadda cagta Soomaaliya ayaa muddo dheer ku dhibtoonaya inuu natiijo wanagsan ka gaaro tartamada kubadda cagta ee caalamiga ah, waxaana tan iyo burburkii dowladdii dhexe uu xulku ahaa mid qiimeynta meelaha ugu hooseysa ka galayay.
RW Khayre Oo Tacsi Ugu Tegay Qoyska Marxuum Ing. Yariisow.(Sawirro)
Odayaal Sheegay Inay Cabsida Ahmed Madoobe Uga Carareen Kismaayo.